Xog: Maxuu ku soo dhamaaday kulankii ay Nairobi ku yeesheen Kheyre iyo Sheekh Shiriif? | Somsoon
Home WARAR Xog: Maxuu ku soo dhamaaday kulankii ay Nairobi ku yeesheen Kheyre iyo...
Xog: Maxuu ku soo dhamaaday kulankii ay Nairobi ku yeesheen Kheyre iyo Sheekh Shiriif?
Waxaa galabta magaalada Nairobi ee dalka Kenya markoodii ugu horeysay kulan albaabadu u xiranyihiin ku yeeshay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Ra‘iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre.
Shariif iyo Kheyre ayaa baduba ah musharaxiin sanadkan u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana kulankoodii galabta ku wehliyey xubno kale oo u badan xildhibaanno.
Kulankaas intiisa badan waxaa looga wada-hadlay arrimo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020/2021-ka.
Intii uu socday kulankaas Ra’iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre ayaa sida aan xogta ku helnay Sheekh Shariif uga garaabay waxyaabaha uu ka tirsanayo xukuumadiisii, ee dhacay intii uu xilka hayey.
Labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday dhowr arrimood oo ay ka mid tahay wada-shaqeyn dhow oo dhex marta iyo in si dhow la isaga war-qabo.
Sidoo kale xogta aan ka helnay kulanka Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Kheyre waxay sheegeysaa in labada masuul ay ku balameen kulamo kale iyo maalmaha soo socda la bilaabo isbaheysi siyaasadeed.
Waxaa hadda magaalada Nairobi ka socda iskaashi siyaasadeed kii ugu adkaa oo lagu wajaho doorashada soo socota ee madaxtinimada Soomaaliya. Waxaana ku sugan xubno miisaan culus ku leh siyaasadda dalka.
Article horeWeriye C/laahi Kulmiye oo shaaciyey inay soo weerareen ilaalada R/wasaare Rooble
Article socoda Maamul gobolkii koowaad oo soo gudbiyey xubnaha ku matali doona guddiyada doorashada heer federaal